यी ५ राशी हुने व्यक्ति, जसले पैसा उधारो लगेर कहिल्यै गर्दैनन फिर्ता! – " सुलभ खबर "
यी ५ राशी हुने व्यक्ति, जसले पैसा उधारो लगेर कहिल्यै गर्दैनन फिर्ता!
हरेक मानिसको जिन्दगीमा एक न एक जना व्यक्ति यस्तो हुन्छ, जसलाई तपाई विश्वास गर्नु हुदैन । कि त त्यो व्यक्ति लोभी हुन्छ कि त पैसा लगेर कहिले फिर्ता नदिने खालको हुन्छ । छक्क पर्ने कुरा यो हो कि जो मान्छे आफै यस खालको व्यक्तिमा पर्छ । त्यसको जीवनमा पनि टक्कर दिने कोहि न कोहि हुन्छ । ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी ५ राशि हुने मानिस यस्तो हुन्छन जसले उधारो पैसा लगेर कहिले पनि फिर्ता दिदैनन्।
यस लिस्टमा सबैभन्दा पहिला मिथुन राशि आउँछ । यहाँसम्म यदि तपाईलाइ बाहिर घुम्न वा पार्टी गर्नु छ भने मिथुन राशिलाई आफ्नो साथीको रुपमा पाउनु हुदैन । वास्तवमा मिथुन राशि हुने व्यक्तिले निकै देखावटि गर्छन्। त्यसैले उनीहरुलाई सधैँ पैसाको कमी हुन्छ। यदि उनीहरुको बारेमा थाहा छैन भने तपाई आफैले त्यसको मुल्य चुक्ता गर्नु पर्नेछ।
मकर राशि हुने व्यक्ति पैसा कमाउने कुरामा विश्वास गर्छन्। उनीहरु पैसा खर्च गर्न सक्दैनन्। यहाँसम्म कि यदि आफ्नो साथीहरुसँग लन्च वा डिनरमा गयो भने पनि भोक लागेको छैन भन्छन्।
यस राशि हुने व्यक्तिले पैसा घुम्नमा मात्र खर्च गर्छ । उनीहरुले आफ्नो पैसा घुम्नमा खर्छ गर्नको साथै उधारो गरेर जानु परे पनि पछि पर्दैनन्।
सिंह राशि हुने व्यक्तिसँग बस्न र घुम्न सजिलो हुन्छ तर सिंह जंगलको राजा हुन्छ । कोहिले पनि राजाले उधारो लिने कुरामा विश्वास गर्दैन्। यदि सिंह राशि हुने व्यक्तिलाई तलब आएर पैसा दिन्छु भन्दा पैसा दियौ भने कहिले पनि फिर्ता दिदैनन्।
वृश्चिक राशि हुने व्यक्ति निकै बुद्धिमान मानिन्छ। उनीहरुलाई पैसा कसरी कमाउने र खर्च गर्ने कुरा थाहा हुन्छ। उनीहरु पैसा कमाउनको लागि कठिन परिश्रम पनि गर्न तयार हुन्छन्। सबै कुरा राम्रो हुँदा पनि यि राशी हुने व्यक्तिले कहिले पनि उधारो गरेर लगेको पैसा फिर्ता दिदैनन्।
याे उमेरमा आमा भयो महिलाको आयू बढ्छ
प्रजनन विज्ञहरुले ढिला ग’र्भवती हुँदा महिलाहरु निःसन्तान हुनसक्ने चे’तावनी दिएका छन् । तर पोर्चुगल कोइब्रा
काठमाडौ । रवि कार्की (नाम परिवर्तन) काठमाडौंको एउटा फ्ल्याटमा पुगे । खानाका परिकारदेखि मापसेसम्मको राम्रो
जहाँ महिलाहरु जीवनभर एकपटक बिहेको समयमा मात्र नुहाउँछन् !
काठमाडौं- अफ्रिकाको उत्तरपूर्वी नामिबियास्थित कुनेन प्रान्तमा बस्ने हिम्बा जनजातीका महिलाहरु आफ्नो जिवन पर्यन्तसम्म मात्रै एकपटक
ऐजेन्सी । ताइवानमा बस्ने एक युवतीको खुट्टाको औला २ इन्च लामो भएकै कारण सामाजिक सञ्जालमा
काठमान्डौँ । यो दुनियाँमा यस्तो गाउँ पनि छ, जहाँ केटीहरुलाई कुनै केटा पाउन मुस्किल छ